Portrait/ Faranah, ilay ao ambadikin’ny fakan-tsary | Grandir à Antsirabe
PORTRAIT : Ny volana jona 2018 i Faranah no tonga tato amin’ny Grandir à Antsirabe, maso vaon’ny fikambanana. Tsy misaraka amin’ny fankan-tsary ny tovolahy satria iny no angady entiny miasa. Izy no mandrakitra ho sary ireo hetsika sy atrikasa maro ataon’ny fikambanana. Tsy izay ihany, fa maka ireo sary ilain’ny « agence de voyage solidaires Rencontre avec Dago » (agence eto an-toerana izay mandrotsaka manontolo ho an’ny Grandir à Antsirabe ny tombombarotrany) ihany ko izy sy ny réseau OSCAPE.
Inona daholo ry Faranah no tena anjara asanao ?
Mandrakitra ho sary na horonan-tsary ireo atrikasa sy hetsika rehetra karakarain’ny fikambanana. Rehefa vita ny fangalana sary dia mandamina sy mifantina ary manatsara azy ireo, io no tena andaniako fotoana lava. Tena zava-dehibe tokoa io asa io satria manampy be dia be ireo mpiara-miasa ahita mora ny sary ilainy hampiasana amin’ireo tatitra maro samihafa na alefa any amin’ireo tambazotra sosialy.
Fa inona no nanosika anao hiasa ato amin’ny fikambanana ?
Rehefa nahavita fianarana momba ny multimédia izay nataoko nandritra ny 3 taona aho, dia naniry ny hampihatra ny fahaizana noratoviko amin’ireny fikambanana miasa ho an’ny fiarahamonina ireny. Nanaitra sy nahasarika ahy mihintsy ny asa ataon’ny Grandir à Antsirabe ka izany no mahatonga ahy eto !
Ho avy manao ahoana ary no irinao ho an’ny fikambanana ?
Maniry aho hoe ho fantatra manerana an’ny Madagasikara ny asa ataon’ny Grandir à Antsirabe !
Hoy aho hoe, Soavaly. Sady afaka miara-miasa amin’ny olona ny soavaly no tsy very koa raha miasa irery, fahaiza-manao ananako tsara.
Mety hoe tsy dia miavaka loatra ny valin-teniko fa « Superman » ny ahy, hamonjy ny olona.
Penina, ahafahako mametraka ho tadidy ny zavatra tsapako rehetra.
Toetra ratsy ary e ?
Misy, mitovy amiko tsara : « les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais »
Teny farany ary e!
Mahafinaritra ny miara-miasa amin’ny ekipa ato satria sady mahay mifampitondra dia mampazoto miasa no mahay mijery ny lafin-javatra tsara amin’izay atao ! Mazotoa be daholo !
Lire aussi : Noelin’ny Ankizin’ny lalana ao amin’ny CHT